टेलिभिजनको नाममा गरिबका छोराहरूलाई हतियार बनाएर डनगिरी गर्न पाइन्छ ? - JamarkoOnline
होमपेज / विचार / टेलिभिजनको नाममा गरिबका छोराहरूलाई हतियार बनाएर डनगिरी गर्न पाइन्छ ?
आइतबार, भदौ ०८, २०७६ , जर्मर्को अनलाईन
सवाल गम्भीर छ, छातीमा लात थापेर, ज्यानको बाजी लगाएर रिपोर्ट संकलन गर्ने पत्रकारले आज किन आत्महत्याको बाटो रोज्यो रु मर्नै परेपछि खुट्टा तानेर, पोल खोलेरै मरेको होला त पत्रकारले रु दुनियाँलाई चासो छ । नेपालमा लगानीकर्ताको स्वार्थमा खोजमेल गर्ने र मिसन सञ्चालन गर्ने धन्दा छ । देखेरभोगेको सत्य कहाँ लेख्न र बोल्न सकिन्छ त रु तलबका लागि गरिने पत्रकारितामा सत्य प्रकट हुँदैन । स्वार्थको नियोजित र प्रायोजित सामग्रीले जनताको दिमागलाई प्रदूषित गर्दैछ । नबोली मरेको भए आज दुनियाँ गुमराहमा पर्ने थिएन होला । जनकवि गोकुल जोशीले एकपटक भनेका थिए–
गोकुल बाँस्कोटाले न्यूनतम तलब नपाएर पिल्सिएका पत्रकारको निम्ति २४ हजारो सीमा तोकिदिए तर शालिकरामले रातदिन काम गर्दा पनि ठूला व्यापारिक घरानाबाट करोडौं फुत्काउनेहरुबाट रु। १८ हजारसमेत पाएनन् । र, दुनियाँलाई सुसूचित पार्दै मालिकलाई करोडौं असुलीको बाटो खोलिदिने एक श्रमजीवी पत्रकार परिवार पाल्न नसकेर बाबुआमा र श्रीमतीसँग माफी माग्दै जीवनदेखि पलायन भयो । श्रमजीवी पत्रकारलाई झुण्डिएर मर्न बाध्य पार्नेहरू कठघरामा उभिन जरुरी छैन । सीधा कुराको नारा लगाएर बांगो नियत राख्नेहरूको शिकार बनेकै हुन् त शालिकराम रु त्यो टिमबाट निस्कने शालिकराम सुशील अर्यालपछिका अर्का हुन्, मिसनको धन्दा र फण्डाबारे पोल खुल्ने भयमा छट्पटिनेहरूले लुटको स्वर्ग बचाउन अनेकौं हत्कण्डा नअपनाउलान् भन्न सकिन्न । मरेको मान्छेले न्याय पाएको छैन । मर्ने त मरी गो, बाँच्नेलाई किन सास्ती रु शालिक मर्नुभन्दा काल पल्कनु खतरा हो । आज चिच्याउनेहरु लोकप्रिय हुने र तिनको दबाबमा परेर दुनियाँ भ्रमित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
लाइसेन्सबिनाका तथाकथितसँग आस र त्रास पालेर किन बाँच्छ नागरिक समाज रु यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु पर्दैन सरकार रु व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गर्ने, बिनाकारण निहुँ खोज्ने, पावर र पहँुचका आधारमा आइजीदेखि प्रचण्डसँग समेत रिसइबी साँध्ने माध्यम बनेको छ सञ्चारमाध्यम रु दुनियाँ तर्साउने र असुल्ने अर्थात् एकप्रकारले लुटपाट गर्नेलाई लुटेको धनले पक्कै पोल्छ एक दिन त भन्ने कामना गरेर बस्ने कि केही सार्थक पहल पनि गर्ने रु पत्रकारिताको आडमा धनकुबेरहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौं न गोकुल कामरेड, दुईतिहाइले त्यसो गर्न किन सक्दैन रु शालिकरामले सीधा कुरा छाडेर मिसन न्युज रोज्नु माउन्टेन र मालिकहरूको स्वार्थको रणसंग्राम हो भने इराकमा १२ जना नेपालीलाई मर्न आफ्नो म्यानपावरमार्फत पठाउने अनिल जोशीहरूले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । टिभी चलाएर दुनियाँ थर्काउन पाइन्छ रु सञ्चारमाध्यम र गरिबका छोराहरूलाई हतियार बनाएर डनगिरी गर्न पाइन्छ ?
आज समाज नै एकप्रकारको फ्रस्टेसन र डिपे्रसनको शिकार किन बन्दै छ, २४ घण्टा रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल आशावादी जीवन र रचनात्मकताभन्दा नकारात्मकता, निराशा, कुण्ठा किन बाँँडिरहेछन् दुनियाँलाई रु किन बढ्छ डिप्रेसन मान्छेमा रु यसको मेडिकल विज्ञान मात्र होइन समाज विज्ञानभित्र पनि सूक्ष्म अध्ययन जरुरी छ । मर्नेहरू अपराधी र बाँच्नेहरूचाहिँ देवता हुन् भन्ने तर्क नगरियोस्, निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान होस् यावत् सवालको । हुन त महाकवि देवकोटालाई पागल भनेर राँची पु¥याउने देश हो यो नेपाल । शालिकलाई डिप्रेसन थियो त्यही भएर मरेको हो भन्दै हल्ला चलाउनेहरुले बुझ्न जरुरी छ । किन भयो डिप्रेसन रु पागल भन्दै राँची लगिएका बेला देवकोटाले लेखेका थिए ।
साउन २२ गते ३ः५७ मा २१ः३७ मिनेटको लाइभ भिडियो गज्जबको छ । अहिले रवि बचाऊ म्यासेञ्जर अभियानसम्म आउँदा यो गोयबल्स प्रचार किन चल्दैछ रु गहिरो प्रश्न सिर्जना भएको छ । यस्तो भयो होला, झुटो लाञ्छना लाग्यो होला, अनुमानभन्दा छानबिन गरांै, सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सक्दो सहयोग गर्छु किन भन्न नसकेको होला रु अझै त्यति म कमजोर छैन भन्ने धाक रवाफ किन रु कुमारीको पखेरामा घाँँसदाउरा गर्ने किसानको छोरोभन्दा चिच्याहटको शैली त बलियो होला तर के यो देशमा ठूलो स्वर गर्नेले जे गरे पनि हुने हो रु त्यसोभए हिजो अष्टमाया गुरुङको मृत्युमा दुबईसम्म पुग्नेहरू आफ्नै सहकर्मीको दुःखद् मरणमा किन पुगेनन् चितवन रु म हँु हत्यारा र अपराधी त दुनियाँमा कसले भन्छ र रु बरु ७ तलाबाट हाम्फालेर मर्न तयार हुन्छ तर सत्य र अपराध स्वीकार गर्न सक्दैन मान्छे– किन होला रु
आज ठूला मिडियाको दादागिरी र एकाधिकार तोड्ने काम सामाजिक मिडिया र युट्युबरले गरेका छन् । सबैलाई गाली गर्दा पनि युट्युबबाट डलर फल्छ । बचाऊ अभियानको अडियो सन्देश सुनेपछि बालखकालमा हजुरआमाले सुनाएको कथा याद आयो, एकादेशमा एउटा गाउँ थियो । एकपटक ठूलो चोरी भएछ । चोर पत्ता लगाउन भन्दै मुखियाले सबै गाउँलेलाई बोलाएर एक हात लामो लट्ठी दिएछन् र भनेछन्– यो कसैले कसैलाई नदेखाउनू भोलि आउँदा जो चोर हो, उसको लट्ठीचाहिँ थप एक बित्ता लामो हुन्छ । सबै घर–घर लागे । लट्ठी एक बित्ता लामो हुने भएपछि चोरलाई चिन्ता लागेछ र एक बित्ता नापेर लट्ठी काटेछ । बिहान उठेर हेर्दा त लट्ठी ज्युँका त्यँु छ । त्यसपछि मुखियाले एक बित्ता लामो पो हुन्छ भनेको, छोटो भयो त के बिग्रियो भन्ने सोच्दै गाउँले भेलातिर लागेछ । मुखिया बाले सबैलाई एक/एक गरी लट्ठी देखाउन भने । सबैले देखाए । तर, त्यही एक बित्ता छोटो लट्ठीवालाचाहिँ चोर ठहर भयो । कथा सकियो । कथा त्यसे नहोस्, कामना छ !
जनआस्था न्युजमा नारायण नेपालले लेखेको लेख हामीले साभार गरेका हौँ ।